WhatsApp Web dia hanolotra antso am-peo amin'ity taona ity | Androidsis
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, WhatsApp
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra amin'ny Android. Atao havaozina matetika ny fampiharana, miaraka amina endrika vaovao maro. Ho fanampin'izany, asa vaovao maro no karakaraina ho azy, toy ny sticker sticker o ny navigateur anao manokana. Rehefa mandeha ny fotoana, ny sasany amin'ireto fiasa vaovao ireto dia navotsotra ihany koa ao amin'ny kinova tranokala fampiharana.
Ankehitriny, fambara lehibe iray ho an'ny WhatsApp Web no ampahafantarina. Hatramin'ny kinova desktop an'ny fampiharana fandefasan-kafatra tsy ho ela dia hampifandray ireo antso am-peo. Tsy dia be loatra ny antsipiriany naseho hatreto, fa zavatra efa andalam-pandrosoana.
For now tsy tena fantatsika hoe ahoana ny fomba hampidirana ireo antso am-peo ireo ao amin'ny fampiharana. Satria miasa ny WhatsApp Web satria ampifandraisina amin'ny kaonty amin'ny telefaona izy io. Ka misy fisalasalana momba ny fomba fiasan'ireto antso am-peo ireto ao amin'ity kinova tranokala fampiharana ity.
Inona no antenaintsika amin'ny kaonferansa Facebook amin'ity taona ity?
Antso avy amin'ny WhatsApp Web, Stikerika mihetsika, maody maizina, fanovana fiainana manokana momba ny vondrona ary vaovao tsara momba ny fanohanan'ny Windows Phone sy ny fandoavam-bola!https://t.co/Yl2HL768wi
NAOTY: Ny zavatra rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho hita amin'ny ho avy.
- WABetaInfo (@WABetaInfo) Aprily 28, 2019
Ity asa ity dia eo an-dàlam-pamolavolana ao amin'ny kinova tranonkala. Tsy mbola nomena daty izao ho an'ny fampidirana ny lahasa. Ka resaka miandry kely fotsiny, satria azo antoka fa haharitra volana vitsivitsy vao ho ofisialy. Saingy ho asa lehibe izy io.
Hatramin'ny farany dia naneho hevitra toy izany ny WhatsApp Tian'izy ireo hatsaraina ity kinova tranonkala ity. Ankehitriny, iray amin'ireo lahasa lehibe indrindra ananantsika amin'ny fampiharana amin'ny Android no ampidirina. Vaovao tsara, izay mety hanampy amin'ny fampiasana bebe kokoa an'ity kinova ity. Na dia misy fisalasalana amin'ny fiasan'io aza.
Azontsika atao ny manantena fa ho tonga ao amin'ny WhatsApp Web ireto antso anaty feo ireto, na dia tsy mahalala na inona na inona momba ny antso an-tsary izahay. Mety hitranga izany amin'ny fanavaozana ny rindrambaiko any aoriana. Na izany na tsy izany dia hitandrina tsara amin'ny vaovao momba ny fahatongavan'io asa io izahay. Ahoana ny hevitrao momba io fampiasa io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Hanolotra antso am-peo ny WhatsApp Web
HTC dia mikasa ny handefa afovoany vaovao ary hampita izany amin'ny Geekbench